Momba anay - Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd.
Rafitra angovo angovo
Sarety RV / Marinano / Golf / EV / AGV
Toeram-pamokarana herinaratra azo entina
Rafitra fitahirizana angovo
Low Speed ​​EV / Golf cart / Fanadiovana fiara / RV
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. dia orinasam-teknolojia avo lenta, manokana amin'ny R&D ary marketing ny vokatra bateria azo havaozina Lithium. Miaraka amin'ny famoronana ara-teknika sy fitantanana ara-tsiansa, Lithtech dia nanangana ekipa injeniera, mpamorona, mpamorona R&D kilasy voalohany, mpitantana vokatra, antoka kalitao ary serivisy / serivisy ho an'ny mpanjifa. Izay mirotsaka tanteraka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra amin'ny bateria lithium avo lenta,
Izahay koa dia manome ny serivisy feno ho an'ny vokatra bateria namboarina, ao anatin'izany ny famolavolana ny bateria, ny fampandrosoana, ny sela mifantina ary ny BMS, Charger, manolotra vahaolana feno momba ny bateria sy loharanom-barotra fijanonana tokana ho an'ny mpanjifa izahay. Izany no mahatonga ny maro kokoa hahafantatra ny Lithtech Energy any an-trano sy any ivelany.
Ny vokatra bateria Lithium anay dia be mpampiasa amin'ny backup UPS, tilikambo Telecom, rafitra fitehirizana angovo avy amin'ny masoandro, fiara elektrika 、 AGV, sarety golf, mpanadio arabe, moto herinaratra, jiro mandeha amin'ny masoandro 、 ary fitaovana elektrika sns.
Araka ny fantatsika rehetra, ny bateria lithium no sela bateria be mpampiasa indrindra amin'ny indostrian'ny elektronika. lanja maivana, tontolo iainana, fiainana tsingerina lava, ka io no ho fanoloana tsara ny bateria-asidra, ny Lithtech dia manome izay ilainao.
Amin'ny maha-iray amin'ireo orinasa mitombo haingana an'ny mpamatsy bateria / mpamatsy bateria efa za-draharaha ao Shina. Lithtech dia tanora, mavitrika ary mamorona, hanohy hamolavola vokatra misy hevitra vaovao sy teknolojia fivoarana izahay amin'ny ho avy, mino izahay fa afaka mitondra kalitaon'ny fiainana tsara kokoa amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny teknolojia bateria Lithium amin'ny fampiharana rehetra amin'ny fiainantsika.
Fiainana vaovao Firariana angovo vaovao tongasoa eto Lithtech!
Manana orinasa maoderina maoderina izahay ary mampiasa mpiasa maherin'ny 100.
Manolora vokatra vaovao eny an-tsena amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa; Hatsarao ny fahamendrehan'ny kalitaon'ny vokatra.
Raha ilaina dia afaka manolotra mari-pankasitrahana firaketana elektronika isika fa ny antontan-taratasy tany am-boalohany dia tokony hotehirizina ao amin'ny orinasa.
manana mpamorona matihanina matanjaka izahay ary manome teknika fanampiana.
Fampiroboroboana ny paosin'ny bateria
Fahatratrarana ESS haavo MW
Mamolavola rafitra backup nomanina 5G
Nomena loka Natinal Hight-tech Enterprise
Nankatoavin'ny tetik'asa fiaraha-miasa Talenta "Peacock Plan" nasionaly
Maherin'ny 20.000 ny rafitra bateria lithium misy omena ao amin'ny HESS sy ny tadin'ny fiara haingam-pandeha
Mpiara-miasa amin'ny orinasa Pack, niforona ny ekipa matihanina
Fiaraha-miasa stratejika namboarina tamin'ny Nanning Environmental Vehicle Company, Dalian Rongke Power, SIASUN
Niorina i Lithtech, mikendry ny hanolotra vahaolana bateria lithium
Finday: + 86-15013751033
Manontania harona ( 0)
hanaisotra anontanio aloha